Cunsuriga ugu weyn Holland oo dambi lagu waayay | Somaliska
Cunsuriga ugu weyn Holland oo dambi lagu waayay
Ninka ugu magaca dheer cunsuriyiinta Yurub ee hogaamiya xisbiga Xoriyada ee ka dhisan Holland Geert Wilders oo caadeystay aflagaadeyn Islaamka iyo Muslimiinta ayaa maxkamadi dambi ku wayday ka dib markii horey loogu eedeeyay in uu faafiyay borobogaando ka dhan ah Muslimiinta wadankaas.
Ninkaan ayaa diinta Islaamka ku tilmaamay mid fashisti ah isagoo Quraanka la barbar dhigay buugii Hitler waxa uu sidoo kale soo saaray filim lagu aflagaadeeyay Islaamka oo lagu magac daray Fitna.
Xaakimka maxkamada ayaa ku yiri Welders “Waxaa lagugu waayay dambi, maxkamadu waxay ogaatay in hadalkaagii uu yahay mid la aqbali karo marka laga hadlayo dooda bulshada”
Mar uu ka hadlaayay dareenkiisa ayuu cunsuriga waxa uu warbaahinta u ku yiri ” Aad baan ugu faraxsanahay go’aankaan. Waa guul u soo hoyatay dadka Holland. Waa guul u soo hoyatay xoriyada hadalka. Waxaa naloo ogolaaday in aan si adag uga hadalno Islaamka. dambi ma ahan in aan dalkeena ka difaacno Islaameynta”
Arintaan ayaa waxay wadada u furi kartaa cunsuriyiinta kale ee ku nool Yurub in ay waxay rabaan ku hadlaan, waloow hadaba ay sidaa sameeyaan oo Sweden xitaa ay ku nool yihiin kuwo caadaystay aflagaadada Islaamka.
Tirada magangalyo doonka oo waxyar hoos u dhacday
Macalimad “madoow” oo lagu amray in ay fasalka ka baxdo
Soomaalida oo ugu badan dadka doonaya in ay qaataan dhalasha Sweden
June 24, 2011 at 11:33
war waxaani wax qeeyma leh maahan bulshada oo sheegayo weey ogtahay in oo yahay qof xun muslin iyo gaalba waa doqon aan sidaa u aqli badneeyn duli duli dhalay
June 24, 2011 at 12:02
Wallee Gaal Isagoo Hog Kuu Qodaa Ayuu Hej” Ku Dhahaa}
Gaalada Maxkamada Saaree iyo Isaguba Nacayb isku mida ayay Islaam/ Muslimiinta u qabaan , Alle waa uu noo sheegay Yahuud iyo Nasaaro in aysan Raali Naga Noqonayn , ilaa Diinteena naga Saaraan maahan e.
Labo ayay u kala baxaan Gaalada Cunsuriga ah iyo mida kale .
Cunsurigu waa nin aan ku dagayn ” Ku sirayn ” waxa uu uurka ku qabana kuu sheegaanaa. Dalkayga iiga baxna wax wayn maahan haddii uu yiraa , waxaase daran Gaalada aamusan ee isugu kaana sheegta in ay Xoriyda ilaaliyaan , waxay kuwaa doonayaan in anaga maahan e ilmaheena ilmahooda dhaxlaan , dhawr marna erayo sidaaya waan ka maqalnay bulshada .
Marka ” Gaal Waa Gaal ” ee walaalayaaloow ha ku dagminina qosolkaan uurka jirin ee bishimaha uun ah .
June 24, 2011 at 19:25
ninkasi wa nin shaqsi xun dadkan neceb cilmina anlahayn oojahil ah qof nacayb badan hada aragtid wa jahil wuxuu bartay bujahilkayahay balse cunsuraigani irbad bad hadilagu rido maxay kaqada waye dintan ilahay ilaalinayana nacybkisuna afkisa kama badna oo waxbakamaqadayo bulshadan islamka ah insha alah alaahu akbar